Madaxweyne Farmaajo oo aamini waayay Mahdi Guuleed Sirdoona daba dhigay !! (Daawo Sawirro) | Somalia News
Madaxweyne Farmaajo oo aamini waayay Mahdi Guuleed Sirdoona daba dhigay !! (Daawo Sawirro)
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo badi asaxaabtiisii ka aamin baxay wixii ka dambeeyay markii ay dhacday xukuumadii uu hoggaamiyay Xasan Cali Khayre.
Farmaajo oo isku dayaya inuu yareeyo marinada lagu khiyaani karo ayaa ku dadaalay inuu mas’uuliyiinta muhiimka ah ee la shiri kara mas’uuliyiinta sare iyo diblamaasiyiinta, ayaa daba dhigay dhallinyaro ay qaraabo yihiin oo awood badan uu siiyay si ay ula socdaan tillaaba kasta oo wax u dhimi karta danaha Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa July 25, 2020 waxuu Mahdi Guuleed u magacaabay sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, waxuuna isla maalintaas daba dhigay Cabdirisaaq Caato oo maalma kadib xilka looga qaaday si loo qaboojiyo xasarad ka dhalatay gaari uu lahaa Yaxye Cali Hareeri oo xoog lagula wareegay.
Caato ayaa 40 maalin kadib waxaa dikareeta madaxweyne dib loogu magacaabay xoghayaha joogtada ah ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, arrintaas oo meesha ka saareysa in xitaa Ra’iisul Wasaaraha soo socda uu xilka ka qaado.
Dib u magaabidiisii kadib, Cabdirisaaq Caato oo fulinaya amarka madaxweynaha ee ahaa inuu la socdo dhaq-dhaqaaqa iyo kulamada muhiimka ah ayaa waxuu shalay ka qeyb galay shir uu Mahdi Maxamed Guuleed la yeeshay safiirka Sweden ee Soomaaliya, waxaana wararku sheegayaan inuu shir kasta sidaas oo kale uga qeyb geli doono.
Mas’uuliyiin horay uga soo shaqeeyay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay in wali aysan dhicin in xoghaye joogta ah uu ka qeyb galo kulan Ra’iisul Wasaare ama ku-xigeen ay la yeelanayaan mas’uuliyiin kale maadaama laga wada hadli karo arrimo xaasaasi ah.
Ilaha aan xogtaan ka helnay ayaa sidoo kale sheegaya in mas’uuliyiin kale oo isugu jira heer gobal iyo heer federaal la daba dhigay wiilal uu adeer u yahay madaxweynaha dalka si looga baaqsado ka shaqeynta arrimo aan dan u aheyn rabitaanka Villa Somalia.
Previous articleRonald Koeman can not sit on the Barca bench due to Quique Setien
Next articleMareykanka oo 7 ruux oo shan ka mid ah yihiin Shiineys ku eedeeyay jabsasho xogta dowladda